त्यो शनिबार अनि गडगडाएको झोरको झरना… « Sansar News
६ आश्विन २०७८, बुधबार १०:०३
घना वस्तिका कारण उकुस–मुकुस काठमाडौं । कहिलेकाँही सास फेर्न पनि मुस्किल हुने । काठमाडौंको व्यस्तताले सबै मानिसलाई भुलाइरहेको छ । यहाँ मानिसले आफुलाई नै चिन्न नसकेको, आफ्नो शरीर प्रकृति सुहाउँदो रहेको र कहिलेकाँही हरियाली ठाउँमा पुगेर प्रकृतिको काखमा रमाउनुपर्छ, शुद्ध हावा लिनुपर्छ भन्ने थाहाँ हुँदाहुँदै पनि व्यस्तताका कारण त्यो सोच्न तथा त्यस्ता ठाउँमा जाने समय मिलेको हुँदैन वा मिलाईदैन । तर, काठमाडौंबाट १० किलोमिटर बाहिर जाँदैमा त्यहाँ ताजा हावासहित छुट्टै अनुभुति लिन सकिन्छ ।
काठमाडौंको १५ वर्षे बसाईमा दशै र तिहारमा पाल्पा जाने र केही कामको सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा जाने बाहेक यसरी प्रकृतिको काखमा शुद्ध हावा लिन र शरीरलाई एकदिन भएपनि कम्प्युटर र मोबाइलबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने सोँच कहिले आएन । शनिबार पनि अफिसमा कहिले पूरा त कहिले आधा काम गर्नु र केही राजनीतिक, केही सामाजिक संघ-संस्था वा मर्दा–पर्दा बाहेकमै बित्यो ।
जीवनको चार दशक नाघिसकेको शरीरले आजभोली शान्त रहन, प्रकृतिको काखमा रहाउन, उमेर सुहाउँदो खाना खान र सुहाउँदो र सजिलो लुगा लगाउनुपर्छ भन्ने आभाष गराइरहन्छ । यहि मेसोमा यो शनिवार टोखास्थित झोरमा रहेको झरनामा रमाउन जाने मौका मिल्यो । भन्न त बहिनी पारुले ‘गोर्कणतिरको तारेभिरमा जाने योजना रहेको र तपाईँ पनि जसरी पनि जानुपर्छ अझै केही खानेकुरा पनि बोकेर जानुपर्छ’ भनेर केहिदिन अगाडि नै भनेकी थिइन् । तर शुक्रबार रातभर पानी परेकाले जमिन चिसिएको थियो । जमिनले पानी पूर्णरुपमा नसोसिसकेकाले घुम्न जाने या नजाने भन्ने दोमनमा पर्यौ । तर, केही क्षणमा तारेभिर जाने योजना क्यान्सिल गरियो अनि दिउँसोको १ बजे झोर हानियौं ।
काठमाडौंबाट १० किलोमिटर टाढा टोखा नगरपालिकामा रहेको झोरको झरना अनि त्यहाँबाट अझै २ किलोमिटरमाथि रहेको नुवाकोट र काठमाडौंको सीमा, अनि शिवपुरी ब्यारेक । हामी त्यतैतिर हानियौं । हाम्रो ग्रुपमा बच्चासहित १० जना थियौं । त्यहाँ पुगेपछि गाडी त्यहि राखेर टिकट काटेर जंगलको बाटो हुँदै सुर्य चौरतिर लाग्यौं । झण्डै आधा घण्टाको फटाफट जंगलभित्रको बाटो हिँडेपछि पुगियो सूर्याचौरमा । त्यहाँको आनन्द वातावारण र हरियालीले लाग्यो । काठमाडौंबाट झण्डै एक घण्टाको कारको यात्रापछि पुगिने ठाउँ त्यति रमणीय अनि रमाइलो पाउँदा अचम्म पनि लाग्यो । त्यहाँ पुग्दा यस्तो लाग्थ्यो, गाउँको चौपारीमा बसेर बरपिपलको चिसो हावामा मन आनन्दसँग रमाउँदै लामो समयदेखिको थकाइ बिसाएको अनुभूति भयो ।
स्थानीय सरकारको आँखा नपुगेको सूर्यपुरा
हुन त स्थानीय सरकारले झोर झरना तथा सूर्याचौर डाँडोलाई स्थानीय क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि आर्थिक उर्पाजनको माध्यम बनाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाएको होला ! सूर्याचौर डाँडोमा धेरै नभएपनि एक–दुई वटा सुविधाजनक रिर्सोट व्यवस्थित बनाएर त्यहाँको प्रचार गर्ने र त्यहाँ पुग्नेलाई एक–दुई घण्टा त्यहि अल्झाउने योजना बनाउन सके त्यहाँको पर्यटन विकासमा पनि टेवा पुग्ने थियो । सुर्यपूरा डाँडोबाट पारि लहरै हिमाल र आँखा पुग्दासम्म हेर्न सकिने नुवाकोटको रमणीय दृश्यले जो कोहीको पनि मन लोभ्याउँछ । अनि त्यो डाँडाको चिसो हावाले मनको कुना–कुनामा शितलता दिनुका साथै आनन्द बनाइदिन्छ । यस्तो लाथ्यो दिनभरीको बसको यात्रापछि स्वर्गजस्तो ठाउँमा आइपुगियो ।
तर, त्यहाँ पाका मानिस, अफिसको बिदामा घुम्ना वा, परिवारका सदस्य लिएर एकघण्टाका लागि त्यहाँ पुग्नै पर्छ र पुगेर आयौ भन्दा पनि बाइक र स्कुटीमा गएर युवायुवतीहरु टिकटक बनाउनमा व्यस्त थिए भने केही दिउँसै क्याम्प फायर गरिरहेका थिए । त्यहि ठाउँलाई अलिकति परिवर्तन गरेर राम्रा रिर्सोट बनाएर अनि मेनरोडदेखि जंगल पस्ने बाटोमा ढुंगा छापेर गोरेटो बाटो बनाउन सकेमा मात्रै पनि त्यस क्षेत्रले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने देखिन्छ ।
अहिले नेपाली सेनाले नै त्यसको जिम्मा लिएर प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँको टिकट काटेपछि सूर्याचौर जाने अनुमति दिएको भएपनि बाटो त्यति व्यवस्थित देखिँदैन । वर्षाका कारण भएकोले होला ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएको र स्कुटर र बाइक लिएर जानेहरु पनि सहिसलामत फर्कन्छन् कि फर्कदैनन् भन्ने डर लाग्छ । सेनाले मोटरसाइकल र स्कुटीहरुभित्र जाने अनुमति दिए पनि केहीले बीचबाटोमै छोडेर गएको पनि देखिन्थ्यो । अर्कोकुरा एकसय रुपैयाँमा टिकट काटेरभित्र पस्नेहरुलाई जंगलमा हिँड्नु सिवाय अरु केही सुविधा नहुँदा खल्लो लाग्छ । सूर्याचौरसम्म पुग्दा फोहोर तथा प्लाष्टिकहरु छरपष्ट रहेको पाइयो ।
झोरको झरनाको झंकार
सूर्याचौरमा आधा घण्टा बिताएर हामी पुनः फर्कियौं झोरतिर । दिउँसो काठमाडौंबाट १ बजे उकालो लागेका हामी शिवुपरीको जंगल घुमेर झोरको झरनासम्म आइपुग्दा बेलुकाको ६ बज्न लागिसकेको थियो । झोरको झरना झर्ने बाटोमा आइपुग्दा यस्तो लाग्थ्यो, त्यहाँ ठूलो मेला चलिरहेको छ । मुलबाटोबाट ५ मिनेटमात्रै ओरालो झरेपछि झरनामा पुगिदो रहेछ । बाटोभरी मोटरसाइकल, स्कुटर अनि कारहरु छेउ र कुनामा पार्किङ गरिएको थियो ।
सडककका कुना–कुनामा फोहोरका डंगुर अनि केही स–साना चिप्स, काक्रा, आइसक्रिम राखेका खुद्रा पसलहरु थिए । बाटोको त्यस्तो वातावरण हेर्दा मन पनि खिन्न भयो । किन मानिस खनिएका होलान् यहाँ ? भनेर सोच्न बाध्य बनायो । तर, माथि जुन दृश्य आँखामा देखियो तल त्यस्तो थिएन । झोर झरना यतिबेला कालो लेदोको वरिपरि टलक्क टल्किएको चाँदी जस्तो गरि पहाडकोबीचबाट गडगडाएर बगेको छ । त्यहाँसम्म पुग्न बाटो सफा वा व्यवस्थित रहेको देखिदैन । ढुंगा छापेर सिडी बनाइएपनि त्यति व्यस्थित र सफा देखिदैन । यदि त्यहाँको स्थानीय नेतृत्वले झरनाको साथै त्यहाँको पनि सहि विकास गर्ने हो भने झोरले तान्ने पर्यटक थामिनसक्नु हुन्छ । गडगडाएर पहाडको बिचबाट चाँदी झै झारिरहेको आभास हुने झोर झरनाको सुन्दरता रातको अँध्यारोसँगै लुकेको आभास हुन्छ । झोरबाट काठमाडौं त्यति टाढा नभएकाले रातको १० बजेसम्म पनि मानिसहरु झरनाको सुन्दरताको रस लिएर फर्कन सक्छन् भनेर नेतृत्वले सोंचेर त्यहाँ उज्यालोको व्यवस्था गरिदिएमा मात्रै पनि पर्यटकहरु थप बढ्नुका साथै त्यहाँको चहलपहल पनि बढ्छ ।
पर्यटकलाई अल्झाउने वातावरण बनाउन जरुरी
अहिलेसम्म झोर जानेहरु त्यहाँ पुग्ने र फोटो लिने गरेको मात्र पाइन्छ । त्यहाँ उनीहरु १५ मिनेट पनि भुल्न सक्दैनन् । त्यसले गाडी पार्किङमा राखेको पैसा उठाउने बाहेक अरु आर्थिक उपार्जन गर्ने बाटो देखिदैन । त्यसैले त्यहाँका केही खुला ठाउँमा पिकनिक स्पट, बालबालिका खेल्ने थलो, सुन्दर पार्क बनाएर व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न सकियो भने प्रत्येक शनिवार त्यहाँ कयौं परिवार पुग्ने झरनाको रमाइलो हेरेर पिकनिक स्थलमा केहीबेर रमाउन सक्ने हुनाले त्यहाँको आर्थिक उर्पाजनमा टेवा पुग्ने पर्यटनका अरु सम्भावनाहरु पहिल्याएर आर्थिक उर्पाजन गर्न सकिने र स्थानीयको जीवनस्तरमाथि उकास्नसमेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
अर्को त्यहाँ रहेका स–सना घरलाई नै प्रयोग गरेर आम्दानी लिने थलोको रुपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ भने झरना हेर्न पनि टिकट काट्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसका वरिपरीका ठाउँलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।
लोकल कुखुरा र अर्गानिक खानाको स्वाद
हामी झरनासम पुग्दा ६ बजिसकेकोले त्यहीको एउटा रेष्टुरेण्टमा पुगेर बेलुकाको खाना खाने निधो गर्यौ । झरनाभन्दा थोरै तल रहेको युनिक खाजा घरमा पुगेर लोकल कुखुरा काट्न लगाएर खाना खायौं । काठमाडौंमा खाइरहेको र त्यहाँको खानाको स्वाद बेग्लै थियो । फर्सीको मुन्टामा सिमी मिसाएर बनाएको तरकारी, अनि स्कुस र आलुको तरकारीले गाउँको स्वाद र वासना हरर उडाएर ल्याइदिएको भान हुन्थ्यो ।
अनि दसैं र तिहारमा आफ्नो जन्मथलोमा पुगेर घरमै खाना खाएको महसुस हुन्थ्यो । खाजा घरकी दिदीले बनाएको पानी पुरीको स्वाद पनि फरक थियो । ७ जनाको खाना, दूध, खाजा अनि सिंगो कुखुरोको झण्डै १० हजार तिरेर हामी पुनः उपत्यकाको झिलिमिली हेदै फर्कियौ ।